subscribe subscribe page ဒီဇိုင်း
သင်၏ Unsubscribe စာမျက်နှာသည်ဤပုံစံနှင့်လား။
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 11, 2008 အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 29, 2020 Douglas Karr
ငါဆွဲဆောင်မှုရှိသောကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေမျှမျှတတရှုပ်ထွေးခြေလှမ်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှစာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအီးမေးလ်များကိုစာသားရိုးရှင်းပေမယ့်ရှည်လျားသောမိတ္တူရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသူတို့ site ပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုစီတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လှုပ်ရှားမှု (သို့မဟုတ်မလှုပ်မရှားမှု) အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများကိုရရှိခဲ့သည်။ ဒီနေ့ငါစာကောင်းကောင်းရေးထားတဲ့အီးမေးလ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကမ်းလှမ်းချက်ကိုငြင်းပယ်ပြီးအီးမေးလ်ကနေပယ်ဖျက်လိုက်တယ်။
Ouch! နောက်ကွယ်ကသတင်းက "မင်းကမင်းကိုမကစားတော့ဘူး၊
"ya ကိုကြည့်ပါ" မပါဘဲသာလျှင်။
သင်၏ Unsubscribe Landing စာမျက်နှာအတွက်အစိတ်အပိုင်းသုံးခု -
အခန်းကဏ္ -based Subscriptions - မာစတာမှပယ်ဖျက်ခြင်းအစားခေါင်းစဉ်အခြေခံအခြေပြုထားခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပါ။ ၎င်းသည်“ သင်ဒီအီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုမခံယူပါ၊ ဤတွင်သင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အခြားခေါင်းစဉ်အချို့ရှိပါသည်။ ” ကဲ့သို့ရိုးရှင်းနေလိမ့်မည် သင်ပင်မက်လုံးပေးချည်နှောင်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်။
စာရင်းမသွင်းရသည့်အကြောင်းရင်းများ - ဘာကြောင့်လဲမေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့စာရင်းသွင်းထားခဲ့တာလဲ အီးမေးလ်များလွန်းသလား မလုံလောက်? စိတ်မဝင်စားဘူးလား ဘယ်အီးမေးလ်ကမှမပြီးပြည့်စုံပါဘူး။ ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလည်းဆိုတာကိုဘယ်လိုမေးမလဲ။ ပါ ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့က“ သင်နို့စို့!” ဟုပြောသည့်အကြောင်းပြချက်ကိုရွေးချယ်ပါကတောင်းပန်ပါ။
အပိုဆောင်းကမ်းလှမ်းမှုများ - အခြားကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်ထိုစာမျက်နှာအားလုံးအိမ်ခြံမြေကိုသုံးပါ။ ဒီလူဖြူစာရွက်ဖြူကြီးကိုမပစ်ပါနဲ့။ သူတို့ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာ (သူတို့စာရင်းသွင်းတဲ့အခါ) စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်။ သင်၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အဖြူရောင်စက္ကူစသည်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ပြသနိုင်မည်မဟုတ်သနည်း။ နောက်လိုက်ဖို့လူမှုရေးပရိုဖိုင်းကော?
ငါ ExactTarget အလုပ်လုပ်သောအခါ, ငါဒီယေဘုယျစံနမူနာ system ကို (အကောင်အထည်ဖော်စျေးကွက်မိတ္တူနှင့်ဒီဇိုင်းကို) အကောင်အထည်ဖော်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျေးဇူးတင်စကား၊ ExactTarget၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Demo လင့်ခ်နှင့် ပတ်သတ်၍ အချို့သောသူတို့၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာများသို့လင့်ခ်များပါရှိသည်။
ဝယ်သူသို့မဟုတ်အလားအလာတံခါးမှထွက်လာသည့်အခါတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရောင်းချမှုစတင်သည်။ ရေရှည်တည်တံ့သောထင်မြင်ချက်ကိုရရှိရန်သင်၌အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိသည်၊ စာမျက်နှာကိုကွက်လပ်တစ်ခုဖြင့်လက်မလွတ်လိုက်ပါနှင့်!
ကျွန်ုပ်၏ Blogging စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း ...
မတ်လ 11, 2008 မှာ 1: 52 pm တွင်
ကျွန်ုပ်၏သက်ကြီးရွယ်အိုများ (သို့သော်ဝက်ဘ်သုံးနိုင်သော) အဘိုးအဘွားများက“ ဖယ်ရှားခြင်း” ကိုမည်သို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ တခုခု။ အင်တာနက်မှဖယ်ထုတ်ထားသလား သူတို့ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်မှုကနေဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီလား။ သူတို့အိမ်မှဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီလား။ ငါသူတို့အကူအညီအတွက်သူတို့ရဲ့အပူတပြင်းအသနားခံပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။
မတ်လ 11, 2008 မှာ 5: 59 pm တွင်
ငါပြောတာက 'extinguished' or 'terminated' လို့ပြောတာထက်ပိုကောင်းတယ်။ 🙂
မတ်လ 11, 2008 မှာ 4: 50 pm တွင်
ဒေါက်ဂလပ်, ဒီကောင်းတစ် ဦး အစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုပယ်ချခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ၊ သို့သော်၎င်းမှာလည်းအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ သူတို့ဘာကြောင့်စာရင်းပေးသွင်းထားခြင်းမရှိတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးပြီးဖတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မတ်လ 11, 2008 မှာ 8: 23 pm တွင်
ငါ "လှပတဲ့နှုတ်ဆက်စာမျက်နှာ" သည် OK ဖြစ်သည်ဟုထင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကသုံးစွဲသူကိုသူမ ၀ င်တဲ့သူပေးတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသတိမပေးရင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကသူမမှာယူရန်မလိုအပ်သောလင့်ခ်ကို နှိပ်၍ နှောင့်ယှက်ခံရလျှင်၎င်းသည်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒများကိုအတည်ပြုပြီးသည့်အခါ“ အဘယ်ကြောင့်သင်ထွက်ခွာနေရသည်” သေတ္တာသို့မဟုတ်စာမျက်နှာပေါ်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည် browser ၏ close ခလုတ်ကိုမနှိပ်မီစာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်မစောင့်ပါ။
မတ်လ 11, 2008 မှာ 8: 50 pm တွင်
ပယ်ဖျက်ခြင်းသည်သဘောတူညီမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထိုသူနှင့်ဆက်နွှယ်မှုကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ရန်အပြင်အခြားထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပါဆက်လက်ထောက်ပံ့နိုင်သည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။